YouTube waxay xiraysaa akoonka kooxda aqoonsiga Les Brigandes - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo • MUSIC »YouTube waxay xiraysaa akoonka kooxda aqoonsiga Les Brigandes
Bogga fiidiyowga ee YouTube-ka ayaa xirmay akoonkii aqoonsiga ee kooxda 'Les Brigandes', oo cinwaannadooda nacaybka ku saabsana ay ahaayeen mowduucyada hadalada nacaybka.
Le Koontada Brigandes "Waxaa la joojiyay sababo la xiriira jebinta daran ama soo noqnoqda ee xeerarka YouTube ee mamnuucaya isticmaalka waxyaabaha nacaybka leh", ma waxaa hadda la muujiyey markii la isku dayay in la galo koontada kooxda lagu rakibay 2015 ee La Salvetat-sur-Agoût, tuulo yar oo ku taal galbeedka Herault.
"Xeerarka YouTube-ka ayaa mamnuucaya waxyaabaha nacaybka keena," ayay ku jawaabtay madal shirkadda. Fiidiyowyada la soo dhejiyay waa la saaraa markay ku xadgudbaan sharciyadan. Waxaan sidoo kale xirnaa akoonnada adeegsadaha ee si isdaba joog ah ugu xadgudba tilmaamahan. ”
Brigands waxay meelahooda ku dhejin jireen heegan
Waxay la kulmayaan waxa ay ugu yeedhaan "cadaadis", Brigandes-ku waxay leeyihiin ayaa soo saaray war-saxaafadeed taas oo ay ku macneeyeen iyagoo leh “waxay go’aansadeen inay joojiyaan websaydhada. Feejignaankani wuxuu qaadan karaa waqti, iyadoo ku xiran isbeddelka xaaladda.
"Ka bax cadaabta", "Bedelka weyn", "Faransiiska, dhulkeenna": guutada pop-rock-ka oo ka kooban haween dhalinyaro ah oo ku heesta magacyo ay ka kooban yihiin dabeecad dhib badan, Joel LaBruyère, oo lagu tuhunsan yahay inuu madax u yahay bulshada diimeed. The clips of ultra-jawaab-celin kooxeed, kuwaas oo u ololeeya gaar ahaan sameynta "qabiilooyinka" si ay ula dagaallamaan "degenaansho" ee "ilbaxnimada Yurub" iyo u qalma waxbarashada Qaranka sida "kufsi maskaxda maskaxda", tiriyay boqolaal kun oo Muuqaallada YouTube.
MUWAADINTA 15 LAGU QAADO 2019 CINEMA